यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (जेठ ०३ गते शुक्रबार)::Leading Nepal News
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (जेठ ०३ गते शुक्रबार)
आज वि.सं. २०७६ साल जेठ ०३ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं.२०१९ मे १७ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छ । व्यापारबाट राम्रै लाभ हुनेछ । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । मेवामिष्ठान्न आदि खान पाइने र मनोरञ्जनमा भुलिन पाउनु हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरताको प्राप्ति हुनेछ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो): स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल छ । प्रतिद्वन्द्वीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो, आज । पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहने छ । मानसिक रूपमा सबल भइने छ, उत्साह र जाँगरमा बृद्धि हुनेछ । तर्क, बहस र वादविवादमा समय बित्न सक्छ । रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह): स्वास्थ्य सबल रहने छ । मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्ने छ ।भोगविलासमा मन जानेछ । बुद्धिपक्ष र प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रो छ ।व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । सन्ततिपक्षबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुने छ । आफन्तले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् । घरपरिवारमा रमाइलो जमघट हुने छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो): आज कुनै नयाँ काम गर्नका लागि जान्नेबुझ्ने वा ठूलाबडाको सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । मानसिक अशान्ति र बेचैनी हुने योग छ । पढाइलेखाइमा पनि जाँगर चल्नेछैन । नयाँ मान्छेको विश्वासमा चाँडै नपर्नुहोला । घरायसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्छ । परिवारभित्रका झिनामसिना काममा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । कामधन्दामा अर्काको भर नपर्नु नै राम्रो हो, मित्र, सहयोगी र नातागोताको साथ पाइँदैन ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): आज प्रशस्त धनार्जन गर्ने अवसर आउने छ । मुद्दामामिला र सरकारी काममा फाइदा लिन सकिने छ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्, सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम बन्न सक्छन् । थोरै लाभ भए पनि ठूलो आवश्यकता पूरा हुनेछ । साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ ।आँटेको काममा आफन्तहरूले राम्रो सहयोग प्रदान गर्नेछन् ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो): व्यापार फस्टाउनेछ । स्वास्थ्यस्थिति सन्तोषजनक रहनेछ । प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनाले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ ।विशिष्ट व्यक्तिले तपाईंको विचारको कदर गर्नेछन् । आभूषण, श्रृङ्गार, साजसज्जा, फेसनडिजाइन र सञ्चार क्षेत्रका व्यवसायीले राम्रो लाभ प्राप्त गर्नेछन् । मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ । गहना, कपडा वा धातुको कुनै वस्तु खरिद गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । परिवारिक जमघट हुनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते): आज रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ । प्रतिष्ठा बढ्नेछ । बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । व्यापारबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने छ ।नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिने छ । नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनसक्छ । सहयोगीहरूको राम्रो साथ प्राप्त हुनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): आज बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला । व्यापारमा तनाव हुनसक्छ । श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा लाभ हुनेछैन । खर्च बढ्ने छ ।पारिवारिक वातावरण पनि तपाईंको अनुकूल हुने छैन । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । दिक्क र झर्कोलाग्दो यात्राको योग छ, तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । घरमा परपाहुनाको चाप बढ्नसक्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे): आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ, कारोबारमा गतिशीलता आउने छ र व्यवसायबाट पनि राम्रै लाभ हुनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पछाडि कुरा काट्ने शत्रु आफैं पराजित हुनेछन् ।भाइबहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुने छ । मायाप्रेमका लागि समय जुट्ने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । यश, सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । सरकार पक्ष वा सामाजिक कामबाट फाइदा लिन सकिने छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि): व्यापारका क्षेत्रमा सानातिना समस्या देखिन सक्छन् । कडा मिहिनेत र परिश्रमका कारण गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने सम्भावना छ । मिहिनेत र दौडधूप गरेको काममा सफलता प्राप्त भई छाड्ने छ । घरायसी समस्यामा समय व्यतीत हुनसक्छ । जग्गाजमिनको कारोबारबाट सानोतिनो फाइदा नै हुनेछ । नयाँ काममा लगानी बढाउन अनुकूल समय छैन ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द): कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् । गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ । सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । आँटेका काम पनि सजिलै बन्नेछन् । पारिवारिक समस्याहरू हल हुनेछन् । आँटेका कामहरू पनि सजिलै बन्नेछन् ।भाग्योन्नतिको समय छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि): धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने सम्भावना छ । शरीरमा आलस्य र थकानको अनुभव हुनेछ । अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन खिन्न हुने स्थिति आउने छ । सवारी साधन हाँक्दा वा बाटो काट्दा सचेतता अपनाउनु बेस हुनेछ । काममा बाधाअड्चन आउने र ढिलो गरी कार्यसम्पादन हुने दिन छ ।स्वास्थ्यमा समस्या हुनसक्छ । प्रतिकूल समयले घेरेको छ, संयम रहनु होला ।